कुमारी बैंक र यती एअरलाइन्सबीच व्यवसायिक सहकार्य « Sansar News
Mon Dec62021
कुमारी बैंक र यती एअरलाइन्सबीच व्यवसायिक सहकार्य
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार १२:४३
१४ असोज, काठमाडौँ । कुमारी बैंक लि. र निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी यती एअरलाइन्स प्रा।लि।ले व्यवसायिक साझेदारी गर्दै संयुक्त रुपममा नेपालमै पहिलो पटक Swipe and Fly Campaign को शुरुवात गरेको छ ।
यती एअरलाइन्सको स्काई क्लव कार्ड र कुमारी बैंकको भिजा डेबिट कार्डलाई एकीकृत गरेर कुमारी स्काई क्लव कार्ड जारी गरिने छ ।
कुमारी बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले कुमारी स्काई क्लव कार्डका वाहकहरुले अब हरेक खरिदमा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा हवाई यात्रा नगरे पनि हवाई यात्रा गरे सरह नै निश्चित अंक प्राप्त गरिने भएकोले हवाई यात्रा गर्न कुमारी बैंकका ग्राहकहरु समेत प्रोत्साहित हुने विचार व्यक्त गरे ।
अब एअरलाइन्स र बैंकका साझेदार ग्राहकहरुले जुनसुकै समयमा यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने यती एअरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमालले बताए । हवाई र वित्तीय क्षेत्रबीच यस किसिमको व्यवसायिक सहकार्य विल्कुलै पृथक शैलीमा नेपालमै पहिलोपटक भएको हो । त्यसकारण पनि यो सहकार्य दुवै पक्षको लागि नवीन एवं महत्वपूर्ण रहेको छ । यस कार्यक्रमले दुवै पक्षलाई नयाँ उचाई दिनुका साथै नयाँ आयाम थप्ने निश्चित भएको भन्दै सिइओ रिमालले आफ्नो विचार व्यक्त गरे ।
सेवाग्राहीको सुविधाका लागि विभिन्न साझेदारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आकर्षक सहुलियत कार्यक्रम गर्दै आएको कुमारी बैंक र यती एअरलाइन्सले भविष्यमा पनि आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमहरु थप गर्दै लगिने जनाएका छन् ।
हाल कुमारी बैंकmे देशव्यापी १९६ शाखा सञ्जाल, १७२ एटिएम, ३२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा १३ एक्सटेनसन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएकोे छ ।
नेप्सेमा ७२ अकंको पहिरो, एक कम्पनीको सेयर मूल्यमा…
रिलायन्स लाइफको साधारण सभा पुस ११ गते, बुकक्लोज…
२३ बैंकले गरे लाभांश घोषणा: कसको कति ?
एभरेष्ट बैंक र आइएसओएनबीच सम्झौता
सिटिजन्स बैंक र होटल सिटिर्पाक प्रा.लीबीच समझदारी
सि.बि.आई.एल. क्यापिटलद्वारा हिमालयन ह्वाइट हाउसका विद्यार्थीलाई लक्षित लगानी…
नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनः यस्तो छ ६ वटै प्रदेशको नयाँ…
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश संरचना संस्थागत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर
टियूद्धारा परीक्षा तालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले परीक्षा तालिका सार्वजिनक गरेको छ ।
माओवादीमा यसरी छानिन्छन् राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको छनोटको मापदण्ड तयार गरेको छ
जातबारे रोचक प्रसंग : उपाध्याय र जैसी कसरी भए ?
काठमाडाैं । नेपाली समाजमा जात र थरकाे विषयले निकै प्राथमिकता पाइरहेकाे हुन्छ । मानिसहरूले